Xubin cusub oo la wareegtay go’aanka mustaqbalka Lautaro Martinez – Gool FM
(Milan) 16 Abril 2020. Naadiga Inter Milan ayaa wali u dagaallamaysa sidii ay uga ceshan lahayd Barcelona weeraryahankooda Luataro Martinez oo kooxda reer Spain ay weerar culus usoo qaadday sidii ay ula wareegi lahayd.
Wargeyska kasoo baxa dalka Talyaaniga ee Gazzetta dello Sport ayaa maanta daabacay in Luataro uu Inter kaga tagi karo kaliya go’aanka madaxweynaha kooxdas ee Steven Zhang oo xiddigan fasixi doona haddii uu dalbado in la iibiyo.
Laacibka reer Argentina ayaa si xoog leh loola xiriirinayaa ka tagista garoonka Giuseppe Meazza suuqa xagaagan, iyadoo ay ku dagaallamayaans saxiixiisa kooxo ay ugu horreeyaan Barcelona iyo Manchester United, si la mid ah Manchester City iyo Chelsea ayaa xaaladdiisa ilaashanaya.
Waxaa soo if baxay horraan in Barca ay la kulantay wakiilada Lautaro, waxaana kooxd La Liga difaacaneysa ay dooneysaa inay heshiiska laacibkan ay ka dhigto mid kulansada lacag iyo ciyaartoy hal iyo labo ah, halka sidoo kale ay bixin karaan qiimaha heshiiskiisa lagu jabin karo oo ah 111 milyan oo euro.
Carles Alena, Nelson Semedo, Junior Firpo iyo Marc Cucurella ayaa hadda ah xiddigaha ay Barcelona u diyaarisay inay ka qayb galiso iibka 22-jirka reer Argentina, balse Madaxweyne Steven Zhang ayaa doonaya kaliya lacag toos ah (kaash) si uu kooxda ugu qarash gareeyo si ay saxiixyo kale sameyso.